Ny taona 2013: Mamy Ravatomanga : Fiaramanidina an-jatony miliara -
AccueilRaharaham-pirenenaNy taona 2013: Mamy Ravatomanga : Fiaramanidina an-jatony miliara
16/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ao anatin’ny krizy lalina ny firenena ny taona 2013, mbola voasazin’izao tontolo izao i Madagasikara ary saika nanakatom-baravarana ny ankamaroan’ny orinasa teto ankoatra ireo voatery nandroaka mpiasa vokatry ny fikatsoan’ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny, indrindra ny tontolon’ny asa fandraharahana. Ankoatra ny Villa Pradon, ireo “building” sy villa avo lenta maro ao an-drenivohitry Frantsa dia mbola novidian’i Mamy Ravatomanga ny taona 2013 ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka TOA (Trans Ocean Airways). Manodidina any amin’ny 100 miliara fmg any raha kely indrindra araka ny tombatomban’ny mpahay ara-toekarena no vidin’ity kaompania ity izay manana fiaramadina Beechcraft BE-90 mitentina any amin’ny 30 miliara fmg ary Cesna 560 XL mitentina any amin’ny 90 miliara fmg, novidiana ny taona 2013 mihitsy.
Tsy misy latsaky ny 100 miliara fmg ny sora-bola re isaka ny mitanisa ireo trano sy orinasa novidian’i Mamy Ravatomanga nandritra ny Tetezamita. 200.000.000 fmg ohatra fotsiny ny m2 amin’ireo trano maro novidiany ao amin’ny Villa Chaptal (Parisy), 22 miliara ny Pradon, ny Azura Fouplointe sy Taolagnaro, ankoatra ireo kaonty amin’ny banky maro any Dubai, Maorisy, Monaco, sns. Nandritra ny fitondrana HAT avokoa no nividianany izany rehetra izany, amin’ny fotoana tena nianjeran’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny ara-toekarena teto Madagasikara.
Fifanojoan-javatra daholo ve izany ireny feo nandeha teto mikasika ny trafika-na “bois de rose” nahavoatonontonona ny anarany nandritra iny Tetezamita iny? Marihana fa maherin’ny 75.000 T ny andramena niondrana tany ivelany nandritra iny fitondran’i Andry Rajoelina iny. Mifanaraka amin’izany rehetra izany ve ny fanambarana sy ny hetra naloan’ny orinasa SODIAT any amin’ny fanjakana? Tsy zavatra sarotra ny manamarina izany rehetra izany, toa fiheverana ny saim-bahoaka ho mora ambakaina ihany ny filazana fa 27 taona niasa i Mamy Ravatomanga koa tsy mahagaga raha manana ireo harem-be rehetra ireo.
Baomba lakrimôzena sy fisamborana no setrin’ny hetsika fanoherana am-pilaminana ny hosoka sy hala-bato tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai, araka ny baikon’ny praiminisitra Ntsay Christian tany amin’ny Prefektora… Fanehoana ireo porofo maneho ny fisian’ny hala-bato sy ...Tohiny
« Madagasikara misandratra 2030 » : Hiainga amin’ny harena sy fahaiza-manao isam-paritra ny fampandrosoana
Fetin’ny krismasy:ANKIZY 13 000 NOZARAIN’NY VADIN’NY FILOHAMPIRENENA KILALAO